Cajalad laba dhinac ah, xumbo cajalad laba dhinac leh, sidee looga saaraa raadadka nooc kasta oo ah cajalad laba dhinac leh? |
Cajalad laba dhinac ah, xumbo cajalad laba dhinac leh, sidee looga saaraa raadadka nooc kasta oo ah cajalad laba dhinac leh?
Nolosheena maalinlaha ah, waxaan inta badan isticmaalnaa cajalad, meelo kala duwanna, nooca cajaladda la isticmaalay iyana way kala duwan tahay. In kasta oo cajaladdu ay aad ugu habboon tahay in la isticmaalo, haddana waxaa jirta dhibaato caadi ah, taas oo ah, aad bay u adag tahay in laga saaro raadadka uu cajaladdu reebay ka dib isticmaalka. Dad badan ayaa dooran doona inay isticmaalaan shukumaan qoyan, laakiin habkani ma awoodo inuu gebi ahaanba ka saaro raadadka cajaladda. Meelaha ka baqaya inay qoyaan, habkani kuma habboona. Dhab ahaantii, uma baahnin inaan dadaal badan ku bixino sidii aan u nadiifin lahayn raadadka nacaybka ee cajaladda dhejiska ah. Waxaan si sax ah u xallin karnaa dhibka iyada oo loo marayo hababka xariifka ah. Ka dib markaan akhrino waxyaabaha ku jira, waan fahmi doonnaa.
Cajalad dhinac dhinac ah
Habka looga saarayo cajaladda dhejiska leh ee labada dhinac leh ayaa sidoo kale ah nooc ka mid ah oo inta badan loo adeegsado nolol-maalmeedkeenna, maxaa yeelay ma muujin karto raad-raacyada marka la isticmaalayo, gaar ahaan meelaha xafiisyada ku urursan qaarkood, marar badan ayay soo muuqataa. Haddii aad rabto inaad ka saarto cajaladda dhejiska leh ee labada dhinac leh, marka hore, ha jeexin lakabkaas warqadda, ka dibna ku afuuf timo engejiye. Waqti dheer ma qaadan doonto intaad hoos u dhigi karto. Haddii la yiraahdo waxay reebtay calaamad madow, waqtigan waxaad isticmaali kartaa saliidda ubaxa cad ee guriga si aad ugu sawirto, ka dibna isticmaal maro si tartiib ah u masax, ka dibna mar kale ku nadiifi biyo. Dabcan, habkani wuxuu ku wajahan yahay waxyaalaha aan biyuhu lahayn. Haddii calaamadda madow ee meesha la isticmaalay aysan aad u weynayn, waxaan u adeegsan karnaa tirtir si aan u masaxno. Haddii aaggu aad u ballaaran yahay, waxaan u adeegsan karnaa khamriga fuuq -baxa, oo ah waxa aan ugu yeerno aalkolada warshadaha, meesha dhejiska, ka dibna ku masax maro.
Xalka dhibaatada calaamadaha koollada hufan ayaa ah meelahaas oo aan dhibku aad u weynayn, waxaad dooran kartaa tirtiraha si aad u tirtirto calaamadahaas. Isla mar ahaantaana, waxaad kaloo dooran kartaa inaad isticmaasho shukumaan qoyan. Waxaa la qiyaasayaa in habkani uu noqon karo fekerkii ugu horreeyay marka aad aragto calaamadda gubashada ee noocan ah. Ku dabool shukumaan qoyan meesha calaamadeysan, ka dibna tirtir ka dib raadadka cajaladda dhejiska si tartiib ah u dumin. Dabcan, waxaan sidoo kale soo sheegnay inay tahay meesha aan ka baqayn inay qoyan ku dhegto. Khamrigu sidoo kale wuxuu xallin karaa dhibaatada raadadka cellophane, laakiin ka hor intaanan isticmaalin habkan, waa inaan marka hore hubinnaa in meesha la mariyo aysan ka cabsanayn inay sii yaraato. Nadiifi, hana ku dhejin wax aalkolo ah, ka dibna si tartiib ah oo si joogta ah meesha ugu tirtir calaamadda xabagta ilaa ay ka tirtirto. Saabuunta ayaa sidoo kale si wax ku ool ah uga saari karta raadadka xabagta hufan, tallaabooyinka iyo hababka la isticmaalayna waxay la mid yihiin kuwa kor ku xusan. Biyaha dhaqista ciddiyaha caadiga ah waxaa ku jira qaybo kiimiko ah, sidaa darteed si loogu adeegsado si meesha looga saaro raadadkaas, saamaynta ayaa iyaduna wanaagsan.
Calaamadaha dhejiska ee labada dhinac leh ee derbiga ku yaal ayaa marka hore la nadiifin karaa iyadoo la isticmaalayo ciddiyaha ciddiyaha. Marka hore, sababtoo ah biyaha iftiinka ah ayaa ka saari kara midabka asalka ah ee darbiga, waxaa lagugula talinayaa inaad habkan u adeegsato meelahaas oo aan muuqan. Haddii aaggu ballaadhan yahay, oo weliba aad u muuqda, laguma talinayo. Isla mar ahaantaana, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa habka kululaynta si aad u jilciso cajaladda dhejiska ee labada dhinac leh Tusaale ahaan, waxaad ku afuufi kartaa timo engejiye, ka dibna si fudud ayaad uga saari kartaa ka dib marka uu jilco. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale isticmaalnay maro qallalan oo khal leh si aan u daboolno raadadka dhejiska ee labada dhinac leh. Si kastaba ha ahaatee, waa inaan qof walba xusuusinnaa in khalkii la isticmaalay uu yahay khal cad. Marna waa inaynaan isticmaalin khalka cas ee midabka leh, waayo darbiyada gurigayaga badankoodu waa caddaan. Haddii aan isticmaalno casaan, aad bay u fududahay in raadadka laga tago derbiga.
Haddii xumbada xabagta laba dhinac leh laga saaro derbiga, waxaad dooran kartaa waxa la afaystay oo xoqid gees yar, ka dibna gacantaada hoos ugu jiid. Way ka sii daal badan tahay habkan, laakiin wax raad ah kuma reebi doonto. Haddii lagu isticmaalo balaastik, marka hore waxaad ku rushaysaa shukumaan biyaha kulul, ku dabool xumbada dhejiska laba-geesoodka ah ilaa ay ka qoyso, sidoo kale hel gees yar, ka dibna si tartiib ah iska xoq. Haddii aad ku dhejiso dhalada, waxaad isku dayi kartaa inaad isticmaasho xoogaa saabuun ah, ku rid maro nus ah oo qoyan oo dhowr jeer dib u masax. Haddii ay tahay calaamad adag, waa inaad marka hore qoyso, ka dibna ku masax saabuunta.
Markaad aragto xoogaa cajalado dhegdheg ah, ha u isticmaalin mindi si aad u xoqdo. Waxay kaliya dhaawici doontaa waxii asalka ahaa. Adigoo adeegsanaya hababka jilicsan ee kor ku xusan, waxaad sidoo kale ku guuleysan kartaa saamaynta nadiifinta, waxa ugu muhiimsanna ma aha inay waxyeelleeyaan waxyaabaha ku hoos jira calaamadda xabagta.
Waqtiga dhejinta: Jul-23-2020
Intertape Polymer Group Aluminium -bireed, Wejiga Labaad ee Xoojiya Aluminium-ka Wajahaya, Fiilooyinka Aluminium ee Hal-dhinac leh, Sharooto, Aluminium -bireed -Muraayadda Muraayadda Muraayadda, Sidee u Kululaan Kartaa Cajaladda Fiilooyinka Aluminiumka,